Galaxy S8 နဲ့ S8+ အတွက် Rose Pink edition ဖန်တီးလိုက်တဲ့ Samsung! – AsiaApps
Samsung Galaxy S8 နဲ့ S8+ အတွက် Rose Pink edition ကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ ၃ ရက်နေ့က UK မှာဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
LONDON, UK – 3rd January 2018 – Samsung Electronics has today announced the launch of the Rose Pink version of the Galaxy S8 and S8+ smartphone in the UK.
Rose Pink edition ဟာ UK ကိုမရောက်ခင် Taiwan, North America နဲ့ Europe အစရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကတည်းကရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ S8 အနေနဲ့ စျေးနှုန်းအပိုင်းကတော့ အရင်ကထက်အများကြီး ကျဆင်းသွားပါတယ်။ Galaxy S9 ကလည်းထွက်ရှိဖို့သိပ်မလို၊ Rose Pink edition ကလည်းကျက်သရေရှိပြီးလှနေ တာကြောင့် ဝယ်သင့်/မဝယ်သင့်စဉ်းစားရတာ အနည်းငယ်တော့ အကြပ်ရိုက်စေမှာပါ။
S8 ဟာ Midnight Black, Orchid Gray, Coral Blue နဲ့ Arctic Silver အစရှိတဲ့အရောင်တွေနဲ့ ထွက်ရှိထားဖူးပါတယ်။ Rose Pink ဟာနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ အရောင်ဖြစ်တာကြောင့် Latest edition လို့လဲဆိုနိုင်ပါတယ်။ Latest edition ဆိုပေမယ့် dual sim version တော့မဟုတ်ပြန်ပါဘူး။
Samsung Launches Rose Pink Edition of the Galaxy S8 & S8+ in the UK – https://t.co/Ek2zFNOYwU pic.twitter.com/gD19KR3kGC
— GadgetsBoy (@GadgetsBoy) January 3, 2018
Rose Pink edition, Samsung, Smartphone